Boise, ID • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Ao amin'ny RubPage.com no ahitanao ny fikosoham-bolo tsara indrindra sy fanorana nuru Boise, ID.
Boise no renivohitra sy tanàna be mponina indrindra amin'ny fanjakan'i Idaho any Etazonia, ary ny fari-paritany misy an'i County County. Any amin'ny Reniranon'i Boise any atsimo andrefan'ny Idaho no misy azy, 41 kilaometatra atsinanan'ny sisintanin'i Oregon, ary 66 km atsinanan'ny sisintanin'i Nevada. Ao amin'ny RubPage.com no ahitanao ny tsara indrindra manosotra ny vatana ary Boise massage nuru, ID.
Fotoana tsara indrindra hitsidihana Martsa-Mey, Septambra-Novambra